Ifantasy yokugqibela viii iphinde yenziwe ngoku kwi-android kunye ne-ios, isaphulelo sexeshana
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo IFantasy Final VIII iphinde yenziwa ngoku kwi-Android kunye ne-iOS, isaphulelo sexeshana
IFantasy Final VIII iphinde yenziwa ngoku kwi-Android kunye ne-iOS, isaphulelo sexeshana
Isikwere i-Enix ibhengeze kwinyanga ephelileyo ayizukuphumeza enye kodwa ezimbini zokugqibela zeFantasy VII imidlalo yeeselfowuni ngo-2021. Nangona kunjalo, inkampani yaseJapan ityhilwe ngempelaveki ukuba isihloko sayo sokuqala sokuQala esiShukumayo kulo nyaka nguFantasy wokuGqibela VIII owenziwe ngokutsha.
Okubaluleke ngakumbi, umdlalo uphungulwe kude kube ngu-Epreli 4, ke ngaphandle kweqonga, Final Fantasy VIII Ixabise iindleko nje nge $ 16.99 (ezantsi isuka kwi $ 20.99) nge Ivenkile yosetyenziso kwaye Ivenkile yeGoogle Play . Nangona oku kunokuziva kubiza kakhulu kuninzi, iMidlalo yokuGqibela yokuQheleka ihlala ikwiinkqubo zokuthenga ngexesha elinye ezingabandakanyi ukuthengwa kwangaphakathi nohlelo. Ngaphezulu koko, banikezela ngeeyure ezininzi zomxholo, ngaphandle kokubala ukugaya okuqhelekileyo okufunekayo yi-JRPGs.
Ukuya kuthi ga kwiFantasy yokuGqibela ye-VIII iRastastered iya, umxholo awuyi kuba ngumcimbi, kodwa u-Square Enix uthe umdlalo awunazo iinketho zolawulo olwenziweyo okwangoku. Kwakhona ilifu ligcina ii-aren & apos; azibandakanyi nokuba. Iindaba ezimnandi zezi zinto zombini ziya kongezwa kuhlaziyo oluzayo.
Nangona eli lizibuko elivela kuhlobo lokugqibela lweFantasy Fantasy VIII yePC, ayinazo iimfuno eziphezulu xa kuziwa kwizixhobo zehardware. Umdlalo kufuneka usebenze kakuhle nakwiifowuni / iipilisi ezine-Android 6.0 kunye ne-2GB ye-RAM kuphela, nangona ezinye izixhobo zinokungaxhaswa nangona zihlangabezana neemfuno ezisezantsi.
Final Fantasy VIII yenziwa kwakhona kwi-Android
Ngaba ipixel ilungile
Ngaba i-ID yokuChukumisa iyabuya kwi-iPhone 13? Abaninzi banqwenela njalo
I-Apple iPad Air 2 vs Apple iPad Air vs Apple iPad 4: ukuthelekiswa kweempawu
I-Google Pixel 2, ixabiso lePixel 2 XL, umhla wokukhutshwa kunye nokufumaneka kwesiphatho